Madaxweyne Rayaale oo ka hadlay Arrimaha Doorashada iyo jawaabta Mucaaradka | Somaliland.Org
Madaxweyne Rayaale oo ka hadlay Arrimaha Doorashada iyo jawaabta Mucaaradka
August 31, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)- Guddoomiyayaasha Axsaabta Mucaaradka ah ayaa jawaab ka bixiyay hadal la sheegay in uu ka soo yeedhay Madaxweyne Rayaale, kaas oo nuxurkiisu ahaa in uu hore u dalbaday Agabkii Doorashada dalka lagu galayay.
Madaxweyne Rayaale ayaa la sheegay in uu Xubno Madax-dhaqameed ah oo uu kulan la yeeshay u sheegay in uu hore u dalbaday Agabka Doorashada lagu galayo, isla markaana uu diyaar u yahay qabashada Doorasho xor iyo xalaal ah.
Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID Eng. Faysal Cali Waraabe oo u waramay Wargeyska Ogaal, ayaa wuxuu yidhi, “Horta, Madaxweynuhu wuu iska faan jecel yahay oo faanka wuu iska yaqaanaa ee Shimbir muu dirin. Lacag baan ku shubay buu yidhi, ee Runtaan kuu sheegayaa waxba Lacagna kumuu shubin oo Lacag ma hayo. 350-Kun oo Dollar ayuu yidhi waan ku shubayaa, Shilin ma hayo, Dalkana 3 ilaa 4 Bilood Mushahar lagama qaadan. Markaa waxna ma diri karo, waxna ma qaban karo ee Faanku waa caadadiisa.”
Dhinaca kale, Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) oo isna aanu arrintaa wax ka waydiinay waxa uu ku jawaabay oo uu yidhi, “Adeer, wixii isaga (Madaxweynaha) iyo Komishanku isku raaceen horaanu u cambaaraynay. Markaa, ama Agab ay diraan ha noqoto ama go’aano ay qaataan ha noqoto ama tallaabo kasta oo ay qaadaan oo aananu waxba ka ogayn oo aanay nagala tashan, anaga nama khusayso ee waa mid iyaga u gooni ah.” ayuu yidhi Guddoomiyaha KUlmiye.